Museum of Arts and Decorative Arts, Museum Museum Uměleckoprůmyslové v Praze - Prague
Adiresy: 17. listopadu 2, 110 00 Staré Město, Repoblika Tseky
Raha te hahita zavatra mahaliana sy mahazatra ianao any amin'ny Repoblika Tseky , tokony hijery ny Museum of Decorative and Applied Arts any Prague . Hahita zava-baovao mahavariana momba ny zavatra sy ny zavatra taloha ianao hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-20. Ny fampiratiana dia manintona ireo karazana fampirantiana mahavariana, ary ny tranon'ilay tranom-bakoka dia tsy misy foana.
Description of sight
Ny tranombakoka momba ny zavakanto ara-pambolena sy fampiroboroboana ao Prague dia niasa hatramin'ny taona 1895. Ny fampiratiana voalohany dia natao tao amin'ny Rudolfinum malaza. Taorian'ny 14 taona, dia vita ny fananganana ny tranon-dry zareo, ary nifindra nankany amin'ny rihana voalohany ny tranombakoka. Ny fisokafana ofisialin'ny tetikasa novolavolaina tamin'ny fananganana ny Architekt Josef Schulze dia tamin'ny 1900.
Hatramin'ny taona 1906, ny trano famoahana dia nandrakotra ny rihana faharoa: nisy fitahirizana fitaratra napetraka tao amin'ny trano - fanomezana avy amin'i Dmitry Lann. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny tranonkala rehetra dia nesorina sy nafenina noho ny fanoherana ambanin'ny tany avy amin'ny Museum of Decorative and Applied Art ao Prague. Efa tamin'ny 1949 no noraisin'ny fanjakana io toby io. Fotoana fohy taorian'izay dia niorina tamin'ny fomba mavesa-danja ny trano ary namboarina ny trano rehetra, ary nihanitombo sy nitombo ny tahirim-bolan'ny museum.
Inona no ho hitan'ny mozika?
Ny fanangonana ny Museum of Decorative and Applied Arts (Prague) ao Prague dia efa betsaka ary ao amin'ny efitrano enina enina:
Ny tranokalan'ny fifidianana dia singa lehibe amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny mpiantoka sy ny mpanorina. Anisan'izany ny fiarovana sy ny singa taloha vita amin'ny tanimanga avy amin'ireo olona ao amin'ny Repoblika Tseky, Slovakia ary Moravia avy amin'ny fanangonana an'i Hugo Wavrechka, ary koa ny harena sarobidin'i Karlstejn . Ity misy tsangambato kely vita amin'ny varahina nataon'i Emperora Franz Joseph I.
Hall of textiles sy lamaody , izay ahitana fanangonana tapakila fahiny, sarom-borona ary kisary, kôtika vita amin'ny hoditra, andiam-panahin'ny taonjato faha XX. Eto ianao dia afaka mahita akanjo sy kiraro ara-pivavahana ho an'ny mpikarakara ny fiangonana, lamba ary lahatsoratra miaraka amin'ny perla volamena sy volafotsy miaraka amin'ny perla sy lamba famolavolana mba handrakotra ireo alitara sy sary. Ao amin'io efitrano io ihany, iray amin'ireo seza ireo dia natokana ho an'ny trano fandraisam-bahiny lamaody any Prague sy ny tantarany, izay asehon'ireo modely, fanaka sy kilalao.
Ny efitrano fitaovana sy ny famantaranandro dia manasa anao hijery izao tontolo izao amin'ny hetsika fijerena samihafa. Ny fampiratiana dia andiam-pandrefesana amin'ny karazana sy modely samihafa: tranobe, tilikambo, latabatra sy rindrina, sary hosodoko, famantaranandro, famantaranandro, masoandro, fasika, sns. Ity dia afaka mankafy ireo fitaovana astronoma mahaliana avy amin'ireo mpamokatra Eoropeana tsara indrindra.
Ny efitrano fitaratra sy seramika dia mampahafantatra antsika amin'ny lafiny mahafinaritra amin'ny lafiny andavanandro amin'ny fiainana andavanandro: Glass of Venice sy Bohemia, porcelain sy seramika amin'ny kalitao samihafa sy ny taona, fitaratra sy fitaratra, lambam-baravarana ary zavatra maro hafa. sns. Ao amin'io efitrano io, dia misy fifaninanana fanangonam-bintana mandritra ny fotoana fohy amin'ny fanenon-jaza fahiny.
Ny efitranom-paritra sy ny sary dia mitahiry andian-tsoratra tranainy sy sary sokitra, sary hosodoko sy sary nataon'ireo mpanoratra nandritra ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny 1839 ka hatramin'ny 1950. Misy ihany koa afisy misy sary vita amin'ny alàlan'ny soratra: kabinety sy fitoeran-trano avy amin'ny tranombokim-bidy, tonta sy latabatra, vata fampangatsiahana, sns.
Ny Hall treasure dia mitahiry firavaka vita amin'ny volamena, ampongabendanitra malaza Tseky, ivory, vatosoa sarobidy sy vatosoa, vy, hara-bato, metaly tsy misy fangarony ary fitaovana hafa. Ao amin'io efitrano io koa dia misy trano sy trano fanatobiana entana, ny famolavolana izay nampiasaina ny ivoara, email, vatosoa ary metaly.
Ny tranombakoka dia voaravaka varavarankely miavaka, mozika sy sary sokitra.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny tranombakoka?
Ny fomba mora indrindra hahatongavana any amin'ny Museum of Decorative and Applied Art ao Prague dia metro . Avy amin'ny seranam-piaramanidina Staromestska ara-bakiteny hatramin'ny roa minitra monja. Any akaikin'ny tranobe dia misy fiara fitaterana bus amin'ny laharana 207. Ny metro metro ihany koa dia afaka mahazo ny trams Nos. 1, 2, 17, 18, 25 ary 93.
Ny tranom-bakoka dia miasa mandritra ny andro, afa-tsy ny alatsinainy 10:00 hatramin'ny 18:00. Ny saran'ny tapakila lehibe dia 4,7 € sy 3 € amin'ny ankizy. Misy ihany koa ny taham-pifanarahana amin'ny famoahana maharitra sy maharitra, ary koa ny tombontsoa ho an'ny fisotroan-dronono, fanasaziana sy fitsidihan'ny vondrona.
Recipe tea dite ho an'ny fahavoan'ny fahavoazana
Irina Sheik dia lasa Cowboy tia tanindrazana ho an'ny Love Magazine
Ny zana-kisoa syamiadana - ireo antony nahaterahana sy ireo ohatra momba ny fisarahana ny monochorion monoamniosic kambana
Ahoana no hialana amin'ny olona iray?
Tao an-tranon 'i Drake tsy nisy nanery ny mpankafy niditra tao anaty rano
Password - raozy fotsy: Ho tonga amin'ny lanonana ny vahiny voavolavola, tsy misy vidiny
Ny herin'ny Fanahy
Ny sakafo sinoa
Fanosihosena snail - toy ny mamahana?
Salady misy poti-potaka
Nahoana no manasitrana ny tendroka?
Ahoana ny fomba hanomanana ny patty?
Nahita solon'i Amber Hurd ve i Ilon Mask?